Madaxwaynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga oo kawada hadlay arimaha labada dal. Dec 5, 2012 (QOL) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay dhigiisa
Turkiga Abdallah Gul, iyadoo kulankan ayaa ahaa mid labada dhinac ay kaga wada hadlayeen arimaha labada dowladood waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ka mid ah is bedelada iyo horumarada ka jira Soomaaliya iyo siiwadi taageerada Turkiga uu siinayo xilligan si looga gudbo xaaladaha adage e jira.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu gaaray qasriga Madaxtooyada ayaa waxaa uu salaan sharaf ka qaatay Ciidamada qalabka sida, iyadoo halkaas uu ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Turkiga Abdallah Gul waxa uuna mahad balaaran u jeediyay shacabka dalka Turkiga oo uu sheegay dahqaalaha laga soo qaado in lagu taageero shacabka Soomaaliya.
Labada Madaxweyne ayaa si gaar ah uga hadlay siyaasada iyo ammaanka, isagoo Madaxweyne Xasan Sheekh uu uga mahadceliyay Turkiga taageerada hagar la'aaneed ee ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyed. Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa muddo laba maalmood ah joogi doono dalka Turkiga waxa uuna kulama laqaadan doona ra”iisulwasaaraha Turkiga Ordigan.